မျက်စိကန်းသောဗာတိမဲကို ယေရှုကယ်တင်! | Jesus Saves Blind Bartimaeus! | Real Conversion
စက်တင်ဘာလ ( ၂ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ယေရိခေါမြို့သို့ရောက်ကြလျှင်၊ တပည့်တော်တို့မှစ၍ များစွာသောလူ အပေါင်းတို့နှင့်တကွ ထိုမြို့မှ ထွက်ကြွတော်မူစဉ်တွင်၊ တိမဲ၏သား ဗာ တိမဲအမည်ရှိသော လူကန်းသည် လမ်းနားမှာထိုင်၍ တောင်းစားလေ ၏။ နာဇရက်မြို့သားယေရှုရှိကြောင်းကိုကြားရလျှင်၊ ဒါဝိဒ်၏သားတော် ယေရှု၊ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါဟု ဟစ်ကြော်လေ၏။ ထိုသူကို တိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းဌါ လူများတို့သည် ငေါက်၍ဆိုကြ သော်လည်း၊ ဒါဝိဒ်၏သားတော်၊ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနားတော်မူပါဟု သာ၍ ဟစ်ကြော်လေသော်၊ ယေရှုသည် ရပ်တော်မူလျက်၊ ထိုသူကို ခေါ်ခဲ့ဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ သူတပါးတို့သည် လူကန်းကို ခေါ်၍ မစိုးရိမ် နှင့်၊ ထလော့။ သင့်ကို ခေါ်တော်မူသည်ဟု ဆိုကြ၏။ ထိုသူသည် မိမိ အဝတ်ကိုခြုံပြီးလျှင်၊ ထ၍ ယေရှုထံတော်သို့ပြေးသွား၏။”
( မာကု ၁၀း ၄၆- ၅၀ )
မာကုသည် သူ့အား “တိမဲ၏သားဗာတိမဲ” ဟု ခေါ်သည်။ ( မာကု ၁၀း ၄၆ ) ထိုအချိန် ကာလတွင် ယေရုရှလင်မြို့၌ မျက်စိကန်းသောလူများစွာရှိရမည်။ မြို့သည် ရောမအင်ပါယာ အတွင်း၌ရှိသောယုဒလူမျိုး ထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် ပြည့်လျက်နေကြသည်။ စီတန်း လျက်ရှိသော မြို့လမ်းမကြီးထက်တွင် မျက်ကန်းဖြစ်သူ “တိမဲ၏သားဗာတိမဲ” ရှိသည်။ မာကု အခြားကနဦးခရစ်ယာန်များနှင့်ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ရန် မိမိနာမည်ကို ပြောပြသည်။ မာကုသည် ခရစ်ယာန်များအား ယေရုရှလင်မြို့ ဘုရားကျောင်း၌ရှိစေလိုပါသည်။ သူသည် အဘယ်သူဖြစ် ကြောင်းကို လုံး၀ သိရှိကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ဤအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်ပြီး နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်တွင် ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဗာတိမဲမှာ အသက်ရှင်လျက်ရှိနေ သေးသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယေရုရှလင်အသင်းတော်ဝင်အဖြစ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူသေရင်တောင်မှ သူ့ကိုသတိရအောက်မေ့သောသူ အသင်းတော်၌ များစွာ သောသူများ ရှိနိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် မျက်စိကန်းသောဗာတိမဲထံမှ များစွာသော အရာကို သင်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
၁။	ပထမအချက်၊ လူအများက သင် ယေရှုထံလာသည်ကို တားမြစ်ကြမည်။
ဗာတိမဲသည် လမ်းမကြီးဘေးနားတွင် ထိုင်၍တောင်းရမ်းနေသည်။ ထို့နောက် ယေရှု လာနေကြောင်းကို ကြားခဲ့သည်။ သူက “ဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှု၊ အကျွန်ုပ်ကို သနားတော်မူ ပါ” ( မာကု ၁၀း ၄၇ ) အော်ဟစ်သည်။ လူစုထဲက အများစုက သူ့ကို အော်ဟစ်၍ တိတ်ဆိတ် စွာနေရန် ပြောဆိုကြပါသည်။
သင်သည် ယေရှုထံသို့လာသောအချိန်၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာ မဟုတ်ပေဘူးလား။ လူတို့က သင့်ကို မြစ်တားရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါသည်။ သင်၌ ပျောက်ဆုံးသောမိတ်ဆွေ များရှိလျှင် သူတို့သည် သင့်ကိုမြစ်တားရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြပေလိမ့်မည်။ ပျောက်ဆုံး သောမိဘများရှိလျှင် သူတို့ကလည်း မကြာခဏတားမြစ်ကြပေလိမ့်မည်။ စာတန်ကိုယ်တိုင်က လည်း သင့်ကို ဆီးတားရန် ကြိုးစားအားထုတ်ပေမည်။ ဗာတိမဲကို တိတ်တိတ်နေရန် ပြောဆို ရာတွင် စာတန်၏တွန်းအားပေးမှုကို ခံရသောသူများလည်းရှိမည်ဟု ထင်ပါသည်။ သူတို့က “ဒါဝိဒ်၏သားတော်၊ အကျွန်ုပ်ကိုသနားတော်မူပါ” ဟု အော်ဟစ်သောအချိန်၌ ဆီးတားရန် ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါသည်။ သင်တို့၏ဆိုးသွင်းသောသဘာဝကလည်း သင့်ကို ရပ်တန့်ဖို့ ကြိုးစားလိမ့်မည်။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိုလျှင် ဗာတိမဲကဲ့သို့ ရုန်းကန်ရပေလိမ့် မည်။
“ထိုသူကို တိတ်ဆိတ်စွာနေစေခြင်းဌါ လူများတို့သည် ငေါက်၍ ဆိုကြသော်လည်း၊ ဒါဝိဒ်၏သားတော်၊ အကျွန်ုပ်ကို ကယ်မသနား တော်မူပါဟု သာ၍ ဟစ်ကြော်လေသော်၊” ( မာကု ၁၀း ၄၈ )
သူက “ဒါဝိဒ်၏သားတော်ယေရှု၊ အကျွန်ုပ်ကိုသနားတော်မူပါ” ဟု ပို၍ပင် အော်ဟစ်သေးပါ သေးသည်။ ယေရှုက “ကျဉ်းမြောင်းသောတံခါးဝကို ဝင်ခြင်းဌါ ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သင်သည် ခရစ်တော်ကိုတွေ့ရန် ရုန်းကန်နေမှုကို အရှုံးမပေးပါနှင့်။ သင်သည် ခရစ်တော်အထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် “ကြိုးစားအားထုတ်” ရပါမည်။ “ကြိုးစားသည်” ဟူသောဂရိစကားလုံးကို လုကာ ၁၃း ၂၄ ၌ “အာဂိုနီဇိုမိုင်” ဟု တွေ့ရသည်။ ကျွန်တော်တို့က အင်္ဂလိပ်စကားလုံး “ပြင်းထန်သောဝေဒနာခံစားသည်ဟူသော အင်ဂိုနီ” ကို ထိုစကားလုံးထဲမှ ရရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ကြိုးစားရုန်းကန် ပင်ပန်းရပါမည်။ ယေရှုထံသို့လာရန် တိုက် ခိုက်မှုများလည်း ရင်ဆိုင်ရမည်။ အကြောင်းမျာ လုံးဝလွယ်ကူသောအရာမဟုတ်ပေ။ ငရဲ၏ တန်ခိုးသည် သင့်ကို ဆန့်ကျင်နေမည်။ အပြစ်ကြောင့်ကန်းသောစိတ်နှလုံးသည် သင့်ကို ဆန့် ကျင်နေပါသည်။ သင်သည် အသင့်ခံစားချက်၊ အတွေးအခေါ်၊ အကြံအစည်နှင့်စိတ်ခံစား ချက်ကြောင့် အတိတ်က ရုန်းကန်နေရပါသည်။ သင်သည် ရုန်းကန်မှုအားလုံးကို အရှုံးပေး ထားလိုက်လျှင် ဘုရားသခင်၌ ငြိမ်သက်ခြင်းမတွေ့ရပါ။အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်-
“ဆိုးသောသူတို့၌ ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိ” ( ဟေရှာယ ၅၇း ၂၁ )
ကယ်တင်ခြင်းမရရှိသောသူသည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ယေရှုထံသို့ရောက်လာရန် ကြိုး စားရုန်ကန်မှုများကို ဆီးတားကြပေမည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့အပြစ်ကို ယေရှုက ခွင့်လွှတ် သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် အရှုံးပေးကြပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားကျောင်းထဲ၌ ဇိုဘိုင်းကဲ့သို့ နတ်ဆိုးက သူတို့ကို ဆွဲထုတ်သည်အထိ ထိုင်နေကြပေလိမ့်မည်။ သို့သော် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူများသည် သူတို့လုပ်ဆောင်သည်အထိ “ဝင်ရန် ကြိုးစားကြ ပေမည်။ အခြားသောသူများက “ဝင်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်သော်လည်း၊ မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြ ပေ။” ( လုကာ ၁၃း ၂၄ ) ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့သည် သူတို့စိတ်နှလုံးထဲတွင် ရှိနေပါသည်။
ချုပ်နှောင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ မှောင်မိုက်ညထဲက၊
ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်လာ၊ ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်လာသည်၊
ယေရှု၊ ကိုယ်တော့်ထံ ကျွန်ုပ်လာသည်။
( “ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်လာသည်၊” William T. Sleeper, ၁၈၁၉-၁၉၀၄ )
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ယေရှုထံလာရန် အချို့က ခွန်အားပေးကြလိမ့်မည်။
လမ်းဘေးတွင်ရှိသော ထိုလူအုပ်ကြီးထဲတွင် လူများစွာတို့သည် ဗာတိမဲကို တိတ် ဆိတ်စွာနေရန် ကြိုးစားပြီး ယေရှုထံသို့သည်ကို တားမြစ်ကြပါသည်။ သို့ရာတွင် သူ့ကို ခွန် အားပေးသူ တစ်ချို့လည်း ရှိပါသေးသည်။ “သူတပါးသည် လူကန်းကိုခေါ်၍ မစိုးရိမ်နှင့်။ ထ လော့။ သင့်ကို ခေါ်တော်မူသည်ဟု ဆိုကြသည်။” ( မာကု ၁၀း ၄၉ )
မြေကြီး၊ ဇာတိနှင့်မာရ်နတ်တို့သည် သင့်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြသည်။ သို့ရာ တွင် သင့်ကိုခွန်အားပေးမည့်သူ၊ သင့်ကို ဆုတောင်းပေးမည့်သူ၊ သင့်ကိုစကားပြောမည့်သူ၊ ယေရှုထံသို့လာရန် တိုက်တွန်းမည့် ခရစ်ယာန်ကောင်းများလည်း ရှိပါသည်။ အလေးအနက် ထား၍ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ထောက်သင်းအုပ်ဆရာ ဒေါက်တာ Cagan ၏စကားကို နား ထောင်ကြပါ။ သူသည် သင့်အား ယေရှုထံသို့လာ၍ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စေလိုပါသည်။ သူသည် အမြော်အမြင်ကြီးသောသူဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင်ထံသို့လာဖို့ ရုန်းကန်နေသောသူ များကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကူညီရင်း အတွေ့အကြုံရှိသောသူများဖြစ်ကြပါသည်။ သူပြောသည့် စကားကို အလေးအနက်ထား နားထောင်ပါ။ သူ့အကြံဥာဏ်ကိုလည်း ယူကြပါ။ သူပြောသမျှ ကို လုပ်ဆောင်ကြပါ။ အရှုံးမပေးကြပါနှင့်။ ယေရှုက ဤသို့မိန့်တော်မူပါသည်။
“ယုံကြည်၍ ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်လတံ့။ မယုံကြည်သောသူမူကား အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရ လိမ့်မည်။” ( မာကု ၁၆း ၁၆ )
“သခင်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်” သီချင်းကို သီဆိုကြပါစို့။
သခင်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်၊ ကိုယ်တော့်ထံ ယခုလာသည်၊
ကျွန်ုပ်အား ဆေးကြောပါ၊ အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောပေးပါ၊
ကာရနီမှ စီးသော အသွေးတော်ဖြင့်။
၃။	တတိယအချက်၊ ယေရှုက သူ့ကိုခေါ်ရန် အမိန့်တော်ရှိသည်။
“ယေရှုသည် ရပ်တော်မူလျက်၊ ထိုသူကို ခေါ်ခဲ့ဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။ သူတပါးတို့သည် လူကန်းကို ခေါ်၍ မစိုးရိမ် နှင့်၊ ထလော့။ သင့်ကို ခေါ်တော်မူသည်ဟု ဆိုကြ၏။” ( မာကု ၁၀း ၄၉ )
ယင်းမှာ တရားဟောဆရာများလုပ်ဆောင်ရန် ယေရှုအမိန့်ပေးထားသောအရာဖြစ်ပါ သည်။ အပြစ်သားများကို ယေရှုထံသို့ခေါ်ပြီး ကယ်တင်ခြင်းရစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဧဝံဂေလိတ ရားကို ဟောပြောရန် အမိန့်ပေးထားပါသည်။ ယေရှုက “ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်းတို့ကို ဧဝံ ဂေလိတရားဟောကြလော့” ( မာကု ၁၆း ၁၅ ) ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ”ဧဝံဂေလိ” ဟူသော စကားလုံးသည် “သတင်းကောင်း” ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အပြစ်ကြွေးကိုဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ပါသည်ဟူသောအရာကိုကြားခြင်းသည် သတင်းကောင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ကိုယ်ကာယဖြင့် ထမြောက်ပြီး ကောင်းကင်သို့ပြန်လည်တက်ကြွ ကာ သင့်အား ထာဝရအသက်ကိုပေးရန် ခမည်းတော်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ ထိုင်လျက်နေ သည်ဟူသောအရာကို ကြားခြင်းသည် သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် သင့်အဖို့ ဆုတောင်းနေသည်ကို ကြားရခြင်းသည် သတင်းကောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ရိုးစင်းသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုထံသို့လာပြီး အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းခံရနိုင်ပါ သည်ဟူသောအရာကို ကြားခြင်းမှာ သတင်းကောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ “သခင်၊ကျွန်ုပ်လာသည်” ကို သီဆိုကြပါစို့။
၄။	စတုတ္ထအချက်၊ သင်သည် ယေရှုကိုယ်တိုင်ထံသို့ လာရမည်။
သို့ရာတွင် ရွေးကောက်ခံရသောသူများသာ သူ့ထံသို့လာနိုင်သည်ကို အလေးအနက် ထားစဉ်းစားရမည်။ ထိုနေ့၌ လမ်းမဘေးတွင် လူများစွာရှိကြသည်ကို သတိပြုပါ။ သို့သော် ယေရှုက သူတို့ကို မခေါ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။
“ယေရှုသည် ရပ်တော်မူလျက်၊ သူ့ကို ခေါ်ခဲ့ဟု အမိန့်တော်ရှိ၏။” ( မာကု ၁၀း ၄၉ )
ဗာတိမဲသည် လူအစုအဝေးထဲ၌ ယေရှုခေါ်သောသူ တစ်ဦးတည်းဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ခံရ သောသူများသာလျှင် ခေါ်သံကိုကြားပြီး ယေရှုထံသို့လာသည်။ ယေရှုက “ခေါ်တော်မူသော သူအများရှိသော်လည်း ရွေးကောက်သောသူနည်း၏” ( မဿဲ ၂၂း ၁၄ ) ဟု မိန့်တော်မူသည်။
သင်က ရွေးကောက်ခံသူများထဲတွင် ပါဝင်သူဟုတ်မဟုတ်ကို အံ့ဩနေခြင်းမှာ အ ကျိုးမရှိပါ။ ထိုအကြောင်းကို မစဉ်းစားပါနှင့်။ အကူအညီပေးမည်လည်း မဟုတ်ပါ။ ထိုအ ကြောင်းကို မပြောနှင့်။ မတွေးနှင့်။ သင်သည် ရွေးကောက်ခံရသူများထဲတွင် ပါဝင်လျှင် သင့် အပြစ်အကြောင်းကို သင်စဉ်းစားရပေမည်။ ယေရှုလိုအပ်ကြောင်းကို စဉ်းစားရပေမည်။ ရွေး ကောက်မခံရသူများထဲတွင် ပါဝင်လျှင် ရွေးကောက်ခြင်း ကို စဉ်းစားမည်မဟုတ်။ ယေရှုအ ကြောင်းလည်း စဉ်းစားမည်မဟုတ်။ ဤမျက်ကန်းသည် ကယ်တင်ရှင်ထံသို့လာခြင်းမှာ အ ဘယ်မျှလောက် လွယ်ကူသည်ကို စဉ်းစားပါ။ “သူသည် မိမိအဝတ်ကိုခြုံပြီးလျှင်၊ ထ၍ ယေရှု ထံတော်သို့သွား၏။” ( မာကု ၁၀း ၅၀ )
သင့်အပြစ်အကြောင်း၊ သင့်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် ယေရှုအားလိုအပ်မှု၊ နှင့် အ သွေးတော်ဖြင့် သင့်အပြစ်ဆေးကြောရန် လိုအပ်ချက်များကိုသာ စဉ်းစားပါ။ ယေရှုထံသို့ လာ ခြင်းအကြောင်းကိုသာ စဉ်းစားပါ။ ထို့နောက် ယေရှုထံသို့လာပါ။ “သူသည် သင့်ကို ကယ်တင် မည်၊ သင့်ကို ကယ်တင်မည်၊ ယခု ကယ်တင်မည်။” အာမင်။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး သီချင်း စာရွက်ထဲက နံပတ် ၁၄ ကို သီဆိုကြပါစို့။ “သခင်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်”၊ ထိုသီချင်းကို သီဆိုပါ။ သီဆိုလျှင် အဓိပါယ်ရှိလာလိမ့်မည်။
ကိုယ်တော့်ထံ၊ အကျွန်ုပ်အား ခေါ်သံ၊
အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်အား ဆေးကြောသန့်စင်၊
ကျွန်ုပ်အား ခွန်အား ကြီးစေသည်၊
ရှိရှိသမျှ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေအံ့သောငှါ ဖြစ်သည်။
ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်အား ခေါ်မူသည်၊
ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၌ စုံလင်စေရန်၊
မျှော်လင့်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ကိုးစားခြင်း၌ ပြည့်စေလျက်
( “သခင်၊ ကျွန်ုပ်လာသည်” Lewis Hartsough, ၁၈၂၈- ၁၉၁၉ )
“ကျွန်ုပ်ရှိသည်အတိုင်း၊” ၊ (Charlotte Elliott, ၁၇၈၉-၁၈၇၁ ရေးစပ်သည်။)
မျက်စိကန်းသောဗာတိမဲကို ယေရှုကယ်တင် အကျဉ်းချုပ်!
၁။ ပထမအချက်၊ လူအများက သင် ယေရှုထံလာသည်ကို တားမြစ်ကြမည်။မာကု ၁၀း ၄၇၊ ၄၈၊ လုကာ ၁၃း ၂၄၊ ဟေရှာယ ၅၇း ၂၁။
၂။ ဒုတိယအချက်၊ ယေရှုထံလာရန် အချို့က ခွန်အားပေးကြလိမ့်မည်။ မာကု ၁၀း ၄၉၊ ၁၆း ၁၆။
၃။	တတိယအချက်၊ ယေရှုက သူ့ကိုခေါ်ရန် အမိန့်တော်ရှိသည်။ မာကု ၁၀း ၄၉၊ မာကု ၁၆း ၁၅။
၄။	စတုတ္ထအချက်၊ သင်သည် ယေရှုကိုယ်တိုင်ထံသို့ လာရမည်။ မာကု ၁၀း ၄၉၊ မဿဲ ၂၂း ၁၄၊ မာကု ၁၀း ၅၀။